एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष सरकारप्रति आक्रामक – Dcnepal
एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष सरकारप्रति आक्रामक
प्रकाशित : २०७७ वैशाख २८ गते १२:४५
काठमाडौं। कोरोना संक्रमणले अहिले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदार अहिले स्वदेश फर्किन खोजिरहेका छन्। विशेष गरी खाडी मुलुक, मध्यपूर्व र मलेशियालगायका मुलुकमा रहेका नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सरकारको निर्णयको निर्णयको प्रतिक्षमा छन्।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई विभिन्न चरणमा स्वदेश फिर्ता ल्याउने गरी छलफल गरिरहेको छ। यसैबीच विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले आफूहरुलाई स्वदेश फर्काउन उदासिन भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई लक्षित गर्दै एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्। सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै अध्यक्ष कोइरालाले मजदुर, किसान, सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दै सत्तामा पुगेपनि श्रमिकको हकहितका विषयमा केही नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
सरकारले श्रमिमको कुरा नसुनेको भन्दै उनले जनतालाई झुटो आश्वासन नबाँढ्न चेतावनीसमेत दिएका छन्। विदेशमा रहेको दूतावास नाममात्रको भएको दाबी गर्दै दूतावासले श्रमिकको हितमा काम नगरेको आरोप लगाएका छन्।
बिश्वका मजदुर एक हौ – कार्ल मार्क्स
यिनक़ै भजन कृतन गाएर, यिनकै बिचारलाई अघि सारेर , मजदुर, किषान, सर्वहारा बर्गको नेतृत्व गर्दै कम्युनिस्ट सत्ता प्राप्तिपछिका विचलनले तिमीहरुलाई कम्युनिस्ट सरकारको मंत्रालयमा बस्न १ मिनेट पनी छूट छैन । खै श्रमिकका कुरा सुनेको ? तिम्रा भाषण अनी तिम्रा बोली र आश्वासनलाई कुरी कुरी ।
जागीर गुमेर अहिले धेरै श्रमिक देश बाहिर भोकै हुदा तिमिहरुका बैठक र पार्टी ५ स्टार होटेलमा हूँछन । कती बास नभएर पार्क र मस्जिदमा सुत्दै गर्दा तिमिहरु गार्डवाला घरमा चैन निद्रामा छौ । कतिपय महिला ७ तौ महीनाको गर्भवती अवस्थामा लिफ़्टको आशामा बस्दै गर्दा त्यो अवस्थामा तिम्रा छोरी बुहारी छैनन भनी ढूक्क छौ ।
कतिपय श्रमिक महँगीको कारण महिनैपिक्छ नेपाल बाट औषधि मगाएर ख़ान नपाउदा अन्तिम अवस्थामा बस्दै गर्दा तिम्रा छोरा या ज्वाईलाई त्यो अवस्था भोग्नु परेको छैन तेसैले तिमिलाई बिरामिको चिन्ता छैन ।
धेरै विद्यार्थी भोक र बासको तनाबमा छन तिमलाई बाल मतलब छैन तिम्रा आफ़ंत त छैनन यदि छन भने दुताबासको गेष्टहाउसमा सरकारी बजेटको रोष्ट चपाउन पाईहाल्छन अनी अरु सब भाँडमा गएनी तिमलाई के मतलब ?
सक्छौ भोलीबाटै बोक्न सुरु गर होईन भने zoom मा खोक्न बन्द गर । बुझ्ने छौ तिमीहरू सब तोरीपाँडे हौ ।